Jose Mourinho” Waxaan lacayaarnay Xayawaano? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Jose Mourinho” Waxaan lacayaarnay Xayawaano?
(12-2-2018) Macalinka kooxda Kubada cagta Manchester United oo hadlayey kadib markii ay dhamaatay cayaartii looga badiyey 1-0 ta ee uu la dheeley Newcastle United ayaa sheegay in kooxdiisu la cayaartay Xayawaan.
Jose Mourinho” Waxaan doonayaan in aan Cadeeyo in Cayaartoyda Naga soo horjeedey ee Newcastle United ay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan Gaar ahaan waxaan si gooni ah u amaanayaa daafacyada waxayna Noola cayaaren sida Xayawaanka oo kale.
” Mourinho oo sii hadlaya ayaa yiri Xayawaan dadku waxay u yaqaanaan wax xun laakiin wax xun maaha waa wax mudan in laysku amaano waayo waxa ay Gaareen hadafkoodii Cayaartoyda Newcastle United waxayna Noola cayaareen si caqliga bini aadamka ka weyn aad ayeyna isugu xiraayeen kubad layaab leh ayeyna Nagala hor yimaadeen Xaqiiqdii,